လေဆာဖြင့်ဂဟေနည်းပညာ - သတင်း - Box Optronics
ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့,လေဆာဂဟေအနိမ့်ဆုံးသို့အပူပမာဏကိုနိမ့်ကျစွာလျှော့ချနိုင်သည်။ အပူကြောင့်ထိခိုက်သောဇုန်၏သတ္တုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုအပိုင်းသည်သေးငယ်ပြီးအပူစီးကူးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောပုံပျက်သောအနိမ့်ဆုံးလည်းဖြစ်သည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းညစ်ညမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ ၎င်းသည်အဆက်အသွယ်ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်သောကြောင့်စက်ကိရိယာ၏ ၀ တ်စုံနှင့်ပုံသဏ္deာန်ကိုလျော့ချနိုင်သည်။ လေဆာရောင်ခြည်သည်အာရုံစူးစိုက်ရန်လွယ်ကူသည်၊ ၎င်းကို workpiece နှင့်သင့်တော်သောအကွာအဝေးတွင်နေရာချနိုင်ပြီး၎င်းသည် workpiece ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိ tool များသို့မဟုတ်အတားအဆီးများကြားတွင်လမ်းပြနိုင်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအာကာသကန့်သတ်ချက်များကြောင့်အခြားဂဟေဆော်နည်းများကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ။ ဒုတိယအချက်မှာအပြောင်ပြောင်ကိုနေရာလွတ်တွင်နေရာချနိုင်သည် (လေဟာနယ်သို့မဟုတ်အတွင်းပိုင်းဓါတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်) ။ လေဆာရောင်ခြည်သည်သေးငယ်သောonရိယာပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်၊ သေးငယ်။ နီးကပ်စွာခြားထားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဂဟေဆော်နိုင်သည်၊ ပစ္စည်းများကျယ်ပြန့်စွာဂဟေဆော်နိုင်သည်၊ အမျိုးမျိုးသောသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောသောပစ္စည်းများနှင့်လည်းချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်မြန်နှုန်းမြင့်ဂဟေဆော်ခြင်းကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာဖြင့်လည်းထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ပါးလွှာသောပစ္စည်းများ (သို့) အချင်းပါးလွှာသောဝါယာကြိုးများကိုဂဟေဆော်သည့်အခါ arc ဂဟေဆော်ခြင်းကဲ့သို့မလွယ်ကူပါ။
2. Advantages of လေဆာဂဟေ
(၁) အပူစွမ်းအင်ကိုအနည်းဆုံးလိုအပ်သောပမာဏအထိလျှော့ချနိုင်သည်။ အပူကြောင့်ထိခိုက်သောဇုန်၏သတ္တုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုအပိုင်းအခြားသည်သေးငယ်ပြီးအပူစီးကူးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောပုံပျက်သောအနိမ့်ဆုံးလည်းဖြစ်သည်။
(၂) သံမဏိ ၃၂ မီလီမီတာအထူရှိသောတစ်ခုတည်းသော pass welding ၏ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏သတ်မှတ်ချက်များကိုအတည်ပြုပြီးအရည်အချင်းပြည့်မီသည်၊ ၎င်းသည်အထူပြားသောဂဟေဆော်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောအချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်ပြီး Filler သတ္တုအသုံးပြုမှုကိုပင်သက်သာစေသည်။
(၃) လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်အဆက်အသွယ်ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်သောကြောင့်စက်ကိရိယာ၏ ၀ တ်စုံနှင့်ပုံသဏ္deာန်ကိုလျော့ချနိုင်သည်။
(၄) လေဆာရောင်ခြည်သည်အာရုံစူးစိုက်ရန်လွယ်ကူသည်၊ ၎င်းကို workpiece နှင့်သင့်တော်သောအကွာအဝေးတွင်နေရာချနိုင်ပြီး workpiece ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအတားအဆီးများသို့မဟုတ်အတားအဆီးများအကြားတွင်ပြန်လည်လမ်းညွှန်နိုင်သည်။ အခြားဂဟေဆော်ခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများသည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအာကာသကန့်သတ်ချက်များနှင့်အကျုံးဝင်သည်။ မကစားနိုင်ပါ
(၆) လေဆာရောင်ခြည်ကိုsmallရိယာငယ်တစ်ခုပေါ်တွင်အာရုံစိုက်နိုင်ပြီးသေးငယ်။ နီးကပ်စွာခြားထားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဂဟေဆော်နိုင်သည်။
(၉) ပါးလွှာသောပစ္စည်းများ (သို့) အချင်းပါးလွှာသောဝါယာများကိုဂဟေဆော်သည့်အခါ၊
(10) ၎င်းကိုသံလိုက်စက်ကွင်းကြောင့်မထိခိုက်ပါ (arc welding နှင့် electron beam welding များသည်လွယ်ကူသည်) နှင့် weldment ကိုတိကျစွာချိန်ညှိနိုင်သည်။
(11) ကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများရှိသည့်သတ္တုနှစ်မျိုး (ဥပမာ - ကွဲပြားသောခုခံမှု) ကိုဂဟေဆော်နိုင်သည်
(12) လေဟာနယ်သို့မဟုတ် X-Ray ကာကွယ်မှုမလိုအပ်ပါ။
(၁၃) အကယ်၍ ဖောက်ထားသည့်ဂဟေကိုသုံးပါကဂဟေဆော်ပုတီး၏အတိမ်အနက်နှင့်အကျယ်အချိုးသည် ၁၀: ၁ အထိရှိသည်။
(14) အမျိုးမျိုးသော workstations မှလေဆာရောင်ခြည်ထုတ်လွှင့်ဖို့ device ကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
(2) Whenajig is used for the weldment, it must be ensured that the final position of the weldment is aligned with the welding point that the လေဆာရောင်ခြည် will impact.
(၃) အမြင့်ဆုံးဂဟေဆော်နိုင်သည့်အထူသည် ၁၉ မီလီမီတာထက်ပိုသောအထူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းကိုထိုးဖောက်ရန်ကန့်သတ်သည်။ လေဆာဖြင့်ဂဟေဆော်ခြင်းသည်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအတွက်မသင့်တော်ပါ။
(၄) မြင့်မားသောရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့်မြင့်မားသောအပူစီးကူးမှုရှိသည့်ပစ္စည်းများအတွက်ဥပမာအလူမီနီယမ်၊ ကြေးနီနှင့်သူတို့၏သတ္တုစပ်များအတွက်ဂဟေဆော်နိုင်မှုကိုလေဆာဖြင့်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
(5) When performing medium to high energy လေဆာရောင်ခြည် welding,aplasma controller must be used to drive out the ionized gas around the molten pool to ensure the reappearance of the weld bead.
(၆) စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်လွန်းပြီးများသောအားဖြင့် ၁၀% အောက်သာရှိသည်။
(၇) ဂဟေပုတီးလုံးသည်လျင်မြန်စွာခိုင်မာစွာတည်ရှိပြီး porosity နှင့် embrittlement နှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများရှိနိုင်သည်။
လေယာဉ်၊ လေယာဉ်ပျံ၊ အမြန်ရထားလမ်းစသည့်မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်များတွင်လေဆာဂဟေဆော်စက်နည်းပညာကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ တိကျထုတ်လုပ်မှု၏ခေတ်။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၊ အီလက်ထရွန်နစ်နယ်ပယ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဇီဝဗေဒ၊
လေဆာဂဟေဆော်ခြင်းသည်ခေတ်သစ်နည်းပညာနှင့်ရိုးရာနည်းပညာပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရိုးရာဂဟေနည်းပညာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လေဆာဂဟေ is particularly unique and hasawider range of applications and applications, which can greatly improve the efficiency and accuracy of welding. Its high power density and fast energy release can better improve work efficiency. At the same time, its own focus point is smaller, which undoubtedly makes the adhesion between stitched materials better, and will not cause material damage and deformation. The emergence of လေဆာဂဟေ technology has realized the fields that traditional welding technology cannot apply. It can simply achieve various welding requirements of different materials, metals and non-metals, and because of the penetration and refraction of the laser itself, it can be based on The trajectory of the speed of light itself achieves random focus within 360 degrees, which is undoubtedly unimaginable under the development of traditional welding technology. In addition, because လေဆာဂဟေ can releasealarge amount of heat inashort period of time to achieve rapid welding, it has lower environmental requirements and can be performed under general room temperature conditions, without the need for vacuum or gas protection. After decades of development, people have the highest level of understanding and recognition of laser technology, and it has gradually expanded from the initial military field to the modern civilian field, and the emergence of လေဆာဂဟေ technology has further expanded the application range of laser technology. In the future, လေဆာဂဟေ technology can not only be used in fields such as automobiles, steel, and instrument manufacturing, but also in military, medical, and other fields, especially in the medical field, with the help of its own high heat and high temperature. The characteristics of integration and hygiene can be better applied in clinical diagnosis and treatment such as neuromedicine and reproductive medicine. And its own precision advantages will also be applied in more precision instrument manufacturing industries, which will continue to benefit the development of mankind and society.